Windows7နဲ့ Kali Linux ကို Dual Boot တင်နည်းလေး ပြောပြပေးကြပါ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Windows7နဲ့ Kali Linux ကို Dual Boot တင်နည်းလေး ပြောပြပေးကြပါ
မင်္ဂလာပါ ... ဖိုရမ်မှာ ရှိတဲ့ ဆရာသမားများ ခင်ဗျာ
ကျွန်တော့် Acer Laptop မှာ Memory 8 GB နဲ့ HDD 500 GB တက်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ Hard Disk မှာ ကျွန်တော် Windows7(64 bits ) အတွက် 100 GB နဲ့ Kali Linux (64 bits) အတွက် 100 GB ထားပြီး ပိုတာကို Windows မှာ သုံးဖို့ အတွက် Data Partition ထားခြင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ Windows7နဲ့ Kali Linux ကို ဘယ်လို တင်ရမလဲ ခင်ဗျာ .. ကူညီပေးကြပါဦး ဗျာ ....... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နီယွန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နီယွန်
ပြန်စာ - Windows7နဲ့ Kali Linux ကို Dual Boot တင်နည်းလေး ပြောပြပေ
C: Windows ကို 100 GB ထား
D: Data partition ကို ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့တွက်။
100 GB ကျန်တာကို Free Space ထား (Kali သွင်းမလို့)
ပြီးရင် Kali Guide အတိုင်း သွင်းပါ။ (guided - use the largest continuous free space)
Free Space ထားထားရင် Guided နဲ့ လုပ်ရလွယ်ပါတယ်။ Partition ပိုင်းထားရင် free space ဖြစ်အောင် ပြန်ပြောင်းပါ။
ဒါက တခြားအဆင့်တွေပါ။ Partition က guided - use largest continuous free space ကိုပဲ သုံးပါ။ use entire disk ဆို data အကုန်ပြောင် သွားပါမယ်။
PyaitSone, tu tu, zo
21-11-2014, 03:01 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2014
ကျွန်တော် computer မှာ စာတန်းတစ်ခုတက်နေပြီး window တ
ကွန်ပျူတာမှာတက်နေတဲ့စာတန်းက your copy window is unique. ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့
computer ရဲ့ shut down ကလဲ ကြတယ် ပြီးတော့ window တက်တာကလဲ နေးနေတယ်။ Wellcome
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကောင်းမြတ်သူ77777 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကောင်းမြတ်သူ77777
22-11-2014, 12:18 AM
ပြန်စာ - ကျွန်တော် computer မှာ စာတန်းတစ်ခုတက်ေƛ
Originally Posted by ကောင်းမြတ်သူ77777
ကွန်ပျူတာမှာတက်နေတဲ့စာတန်းက your copy window is unique. ဖြစ်နေတယ်။ြ
အကိုရေ windows7လား windows 8 လား ဆိုတာလေး သိရရင် ပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်ဗျာ။ သိတဲ့အကိုအမတွေ ဖြေရျင်းပေးနိုင်ဖို.ပြောတာပါ။
နောက်ပြီး your copy of windows is unique လို.ပြောတာလား genuine လားဆိုတာကို တချက်ပြန်ကြည့်ပေးပါလားအကို။
2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users KznT Applications 119 05-02-2015 09:10 AM
Installation Guide for Windows7from USB KznT Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော 20 06-02-2013 09:42 AM